Odaygii gabadha Soomaalida ku garaacay baska oo la xukumay - iftineducation.com
iftineducation.com – Haddii aad xasuusataan bishii May ee sanadkaan waxaan soo qornay warbixin ku saabsan gabar Soomaali ah oo nin oday Swedish ah uu ku garaacay baska dhexdiisa iyada oo telefoonka ku hadlaysa magaalada Gävle. Gabadhaas oo lagu magacaabo Halimo Ali Hussein ayaa hada laga abaalmariyay dambigii laga galay.
Maxkamad ku taala Gävle ayaa ninka odayga ah oo 64 jir ah waxay ku xukuntahay ganaax iyo in uu Halimo siiyo 8000kr oo magdhow ah. Maxkamada ayaa sheegtay in ay aaminsantahay in ninkaan uu gabadha ku weeraray jinsiyadeeda darteed. Odaygaan oo gabadha gacmaha ku garaacay iyada oo baska dhexdhiisa telefoonka ku hadlaysa ayaa hadaladiis waxaa ka mid ahaa “Wadankooda kuma haystaan boorsooyin iyo moobeelo laakiin halkaan waa kuwo la wareegaya”. iyo “Waxaan barayaa sida wadankaan looga dhaqmo”.
Halimo ayaa sheegtay in aysan markii hore xitaa doonayn in ay dacweyso ninkaan balse asxaabteeda ay ku qalqaaliyeen in ay booliska dacwad u dhigto, iyadoo sidaa samaysay.
cabirka guska dumarka ku filan daawo